Wednesday November 24, 2021 - 00:37:43 in Wararka by Xarunta Dhexe
Laakiin Hatice Cengiz ayaa warqad furan u qortay Bieber iyadoo ku boorrinaysa inuu "fariin xoog leh u diro" isagoo meesha ka saaraya bandhig faneedkaas.
"Ha u heesina gacan-ku-dhiiglayaasha dilay Jamaal-kii aan jeclaa" ayay Ms Cengiz ku qortay warqadda lagu daabacay Washington Post.
Waxay sheegtay in Bieber uu haysto "fursad gaar ah" si uu u muujiyo in "magaciisa iyo kartidiisa aan loo isticmaali doonin in lagu soo celiyo sumcadda maamul dila kuwa dhaleeceeya".
Baarayaasha dilkaasi waxay aaminsan yihiin in la dilay jirkiisana la baab'iyey xilli ay gabadha u dooneyd dibadda ku sugeysay, iyada oo dilkiisa iyo sida uuu dhacay oo dhan la qariyey.
Mas'uuliyiinta Sacuudiga waxay in mudda ah ku doodayeen inuu dhismaha qunsuliyadda uu ka baxay isaga oo nabad qaba iyaga oo marar badan bedbeddelay hadallada ka soo baxaya Sacuudiga toddobaadyo kaddib marki Khaashuqji la waayey.
Balse dhaxal suagaha boqortooyada wuu dafiray dilka inuu ka dambeeyey, isaga oo sheegay inuu mas'uuliyadda dilka uu dusha saaranayo ka mas'uul Sacuudi Carabiya ahaan, gaar ahaanna marki dadka dilka lagu tuhmayo ay noqdeen kuwa u shaqeeya dowladda Sacuudiga".
06/08/2016 - 14:26:07